घलेगढी : युद्व लड्ने गुफा -
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १०:५२ । रसुवा
जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ ढुङ्गेमा रहेको घलेगढी जहाँ रहस्यमय ढुङ्गा रहेको छ । त्यस ढुङ्गाभित्र सुरुङ समेत रहेको छ । जहाँबाट पुर्खाहरुले चिनियाँ फौज माथि तोप वर्षाएर विजय हासिल गरेका थिए ।
वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष केशरबहादुर बुलुनका अनुसार यस ढुङ्गाको अनौठो इतिहास छ । उनी भन्छन्, ‘यसभित्र ठुलाठुला चट्टानहरु छन् । यहाँ ढुङ्गे गाउँका बालबालिका लगायत बृद्वबृद्वाहरु गर्मीको समयमा शितलता ताप्न जान्छन् ।’
यस ठाउँमा प्रकृतिसँग रमाउन पिकनिक लगाएत फोटो खिच्न मात्रै भएपनि दैनिक मानिसहरुको भीड लाग्दछ । घलेगढीको केही नजिक त्यहाँ भगवान शिवले गोसाईकुण्ड यही बनाउन पोखरी बनाउदै गर्दा भाले बसेपछि नबनाएको भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ ।
स्थानीय नानीदेवी लो का अनुसार सुन्दरादेवी, इन्द्रदेवी, कमेरोगढी लगाएतका हेर्न लायकका शक्तिपीठहरुमा औंशी, पुर्णिमाको बेला धुँवा आउने गरेको बताउँछिन् । उनले त्यसको वरपर फोहोेरमैला गर्न नहुने समेत बताइन् ।
सुन्दरादेवी र इन्द्रदेवी भएको ठाउँमा पानीको भएको बताउँदै उनीले पछि मानिसहरु रजस्वला भएको महिलाले पानी ल्याएपछि मुल सुकेको कथन पाइन्छ ।
चीन र नेपाल युद्वमा यी निसान हुन् । चीनले यही हुँदै बेत्रावतीसम्म कब्जा गरेपनि पछि बीर पुर्खाले फर्काएका थिए । यसैको चिनो हुन् घलेगढी । यसको संरक्षण सम्बद्र्वन गर्न हाम्रो दायित्व छ ।